आफ्नो प्रकाशनको सय अङ्कमा प्रवेश गरेको गोल्डेन न्यूज पत्रिकाका र्समर्थक तथा शुभचिन्तकहरुले पत्रिकाले छोटो समायमा धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको भन्दै गन्तव्यमा पुर्‍याउन आफ्नो र्समर्थन रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनिहरुले बिगतमा भएका राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिँदै कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्न पनि उनीहरुले आग्रह गरे । पत्रिका सय अङ्कमा प्रवेश गरेका उपलक्ष्यमा सुनौलो पब्लिकेसन्स प्रालिले बिहीवार पोखरामा आयोजना गरेको समीक्षात्मक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले पत्रिकासँग हातेमालो गरी अघि बढ्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीस खेमराज उपाध्यायले पत्रिकाले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि गरेको सय दिनको प्रयास सकारात्मक भएको बताए । यो अवधिमा आफूले गरेका कामको प्रतिक्रिया कस्तो भयो भनी बिभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई बोलाएर समीक्षा गर्नु प्रशंसनीय भएको उनले बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका कास्की जिल्ला सह सेक्रेटरी गंगा पोखरेलले संसदवादी दलका कारण संविधान सभा बिघटनको खतरा उत्पन्न भएको बताए । समयमै संविधान नबने शान्ति प्रक्रियामा समेत असर पर्ने धारणा उनले राखे । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद जनतालाई सचेत गराउन मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
नेकपा एमाले कास्कीका सचिव पुण्य पौडेलले जनताले धेरै मत दिएको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीले जातीय आधारमा राज्य बनाएर साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउन खोजेको आरोप लगाए । संसद चल्न नदिएर माओवादीले संविधान सभा बिघटन गर्न खोजेको उनको भनाई छ । पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने आक्रमणकारीलाई पनि माओवादीले संरक्षण दिएको उनले बताए । नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका सहसभापति शोभियत बहादुर अधिकारीले लोकतन्त्र र पत्रकारिता एक अर्काका अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै एउटाको अनुपस्थितिमा अर्कोको भूमिका कम हुने बिचार व्यक्त गरे । नागरिक सर्वोच्चताका नाममा अफवाह फैलाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम कहीँ कतैवाट हुन नहुने उनले बताए । त्यस्ता अफवाहलाई छिचोलेर पत्रकारहरुले निर्भीक भएर जनतालाई सूसुचित गर्ने दिशामा लाग्न गोल्डेन न्यूजले भूमिका खेल्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर बरालले सय दिनमा पत्रिकाले प्राप्त गरेका उपलब्धीले सफल भविष्यको संकेत गरेको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्रिय जनभावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्य खड्का बिखर्चीले आक्रमणकारीहरुले एक जना पत्रकारहरुलाई आक्रमण गर्दैमा असत्यका बिरुद्ध लेख्ने काम कहिल्यै नरोकिने भन्दै नयाँ बिचार र ताजा खवर दिन पत्रिकाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा समेत गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक रवीन्द्र वाँस्तोलाले पत्रकारहरुमाथि बिभिन्न दल वा समूहवाट आक्रमण हुने गरेको भन्दै त्यसको निन्दा गरे । सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न गोल्डेन न्यूजले खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे । महासंघका केन्द्रीय सदस्य पुण्य पौडेलले पत्रकारमाथि आक्रमण जारी रहेको भन्दै आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहनेहरु पत्रकारमाथि कुटपीट गरेर रिस शान्त पार्न चाहेपनि पत्रकारहरु धर्ैयवान र सहनशील हुनुपर्ने धारणा राखे । पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष नारायण कार्कीले पत्रकारिता र पत्रकार कसैको हतियार र अचानो बन्न नहुने बताए । नेपाल ज्योतिष पत्रकार संघ राष्ट्रिय समितिका संस्थापक अध्यक्ष डा. बलराम उपाध्याय रेग्मीले पत्रिकाको नाम र यसको कामले सुखद भविष्यको मार्ग प्रशस्त गरेको टिप्पणी गरे । नेपाल उद्योग बाणीज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकृष्ण कर्माचार्यले राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिन र नराम्रा कुरा सुधारेर लैजान प्रकाशकलाई आग्रह गरे । कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलले पत्रिकामा नयाँपन दिई अघि बढ्न आग्रह गरे । कास्कीका कायममुकायम प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबराज ढकालले समाज रुपान्तरणका लागि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीले जनताको सूचना पाउने अधिकार प्रदान गराउन गोल्डेन न्यूजले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय भएको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका केन्द्रीय सदस्य गणेश भट्टर्राईले पत्रकारितामा अझ धेरै व्यवसायिकताको खाँचो भएको औँल्याए । तमुधी नेपालका अध्यक्ष कर्मा तमुले स्थानीय प्रतिभाको उजागर गर्न र सवै क्षेत्रको संवाद समेट्नु सकारात्मक भएको बताइन् । सामुदायिक सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सीता गुरुङले समुन्नत समाज निर्माणका लागि पत्रिकाले थालेको प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । समाजसेवी अशोक पालिखेले कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई थेचार्ने काममा नलागी मिडियाले वास्तविकता औँल्याउनुपर्ने बताए । सो काममा केही हदसम्म गोल्डेन न्यूज अग्रसर भएको भन्दै उनले आभार प्रकट गरे । बिन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले पनि पत्रिकालाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सवैले हौसला गर्नुपर्ने बताए । शिक्षाविद् तथा साहित्यकार राजेन्द्र चापागाईँले सामाजिक विकृतिमाथि खवरदारी गर्ने कुरामा गोल्डेन न्यूज अग्रस्थानमा रहेको बताए । पुनरावेदन अदालत बार एशोसियन पोखराका अध्यक्ष बोधराज बरालले पत्रिका आवाजविहीनहरुको आवाज बन्न सफल रहोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे । प्रेस चौतारी नेपालका केन्दीय उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले पत्रकारितामा देखिएका चुनौतिलाई चिरेर अघि बढ्न गोल्डेन न्यूज सक्षम भएको आफूले पाएको धारणा राखे । प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष हेमराज बरालले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमणका घटना दोहोरिन नहुने बताए ।
साप्ताहिक पाक्षीक सञ्जालका क्षेत्रीय अध्यक्ष राजबहादुर गुरुङले खोजमूलक समाचार सम्प्रेषण गर्न गोल्डेन न्यूजले खेलेको भूमिकालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ तमुवान राज्य समितिका संयोजक एलपी बञ्जाराले आमुल परिवर्तनको पक्षमा सञ्चारमाध्यामको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने बताए । क्रियाशील महिला पत्रकार समूह कास्कीका अध्यक्ष दुर्गा अधिकारीले फरक फरक स्तम्भ र संवादका माध्यामवाट सवै क्षेत्रलाई समेट्नु अनुकरणीय भएको बताइन् । सुनौलो पब्लिकेसन्स प्रालिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन गोल्डेन न्यूजका सम्पादक रीता गुरुङले गरेकी थिइन् ।
Posted on:December 26, 2009, 8:17 am
e lamjungd.com lai namaste ra U.A.E ma basne sabai shathi harulaielamjungdcom bata dherai samjhana la.....? sathai mero sabai 4irpari4it didee bahinee harulai mero UNIK HERBAL BEAUTY HOM SUNDAR BAZAR4LAMJUNG ma aauna aagraha garda6u tapaiharuko sewama sadhai tayarma bashirahe6u PRO>ANJAN TAMU MOB NO 9846145913 U. H. B. H pariwar
April 24, 2011, 7:44 pm